यही हो बिल गेट्स को घर - IAUA
यही हो बिल गेट्स को घर
ramkrishna December 30, 2016	यही हो बिल गेट्स को घर
सारकै धनि विल गेट्सबारे केही जानकारीहरु अझै रहस्यमै छन् ।माइक्रोसफ्टका संस्थापक गेट्स एक स्कुल ड्रपआउट विद्यार्थी भएर पनि संसारकै धनी बन्न सके । जो आफैँमा एक रहस्यमय कुरा हो । तिनै ५९ वर्षीय धनाढ्य गेट्स बस्ने निवास कस्तो होला ? धेरैको चासोको विषय हो यो । वासिङ्टनमा रहेको उनको बङ्गलाको नाम हो सानाडु ।
उक्त बंगला करिब १ दशमलव ५ एकड (६६ हजार स्क्वायर फिट) मा फैलिएको छ ।२ हजार ३ सय स्क्वायर फिटको रिसेप्सन हल भएको सो बङ्गलामा २ हजार ५ सय स्क्वायर फिटको जिम हल छ । ७ बेडरुम, ६ किचन रहेको सो बङ्गलाको बाहिरी वाल समेत हाइटेक प्रविधिबाट निर्माण गरिएको छ ।
वालमा यस्तो प्रविधि जडान गरिएको छ कि, जहाँ छुँदा नै त्यहाँ फिट गरिएका आर्टवर्क परिवर्नत गर्न सकिन्छ । उनको बंगलामा सुरुदेखि नै त्यस्ता केही ‘थिम्स’ र ‘वालपेपर’ जडान गरिएको छ जहाँ गेट्स र उनका परिवारका अरु सदस्यले आ–आफ्नो चाहना अनुसार वालको रङ फेरिरहन्छन् । वालमा यस्तो प्रविधि जडान गर्न मात्रै गेट्सले करोडौं डलर खर्चेका थिए ।
Previous Previous post: कम्प्युटरको डेस्कटप रिफ्रेस गर्दा आखिर के हुन्छ ?
Next Next post: के के छन्, अदुवा देखि तिते करेला सम्मका औषधीय गुण ?